Trafikana andramena : Voasambotra ny tompon’ny sambo « Paprika » -
AccueilRaharaham-pirenenaTrafikana andramena : Voasambotra ny tompon’ny sambo « Paprika »
16/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tazonina hatao famotorana etsy amin’ny toby Ratsimandrava, nanomboka omaly, ny tompon’ny sambo “Paprika”. Ahiana ho nitondra andramena antsokosoko io sambo io. “ Tamin’iny fotoana nahatrarana ny sambo “Lumina” tamin’ny 4 Febroary 2017, izay nitondra andramena antsokosoko dia nisy sambo hafa ihany koa niantsona tsy lavitra ny sisin-dranomasin’ny Cap Masoala.
Efa tany an-toerana ny “Cellule Mixte” nivondronan’ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny zandarimaria sy ny polisim-pirenena, izay notarihin’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, tamin’io. Rehefa tra-tehaka ny sambo “Lumina” tamin’io dia nitodi-doha nihazo ny seranan-tsambon’i Toamasina. Teny an-dalana hihazo an’i Toamasina, dia nanao “ravitaillement” tao Sainte Marie ny mpitondra ny sambo Lumina sy ireo vondron-kery manokana. Teo anelanelan’izay anefa no tafaporitsaka ity sambo “Paprika” ity, izay ahiana mafy ho nitondra andramena, tahaka ny sambo “Lumina” ihany koa.
Nandeha ny fikarohana sy ny fanohizana ny fanadihadiana momba ity sambo hafa nitondra andramena tamin’iny fotoana nahatrarana ny sambo “Lumina” iny. Voasambotra ny mpivady izay tompon’io sambo io ary mandeha ny fanadihadiana amin’izao fotoana.
Tsy avelan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ho vitavita ho azy mihitsy ny fanenjehana an’ireo mpanondrana harem-pirenena na iza izy na iza. Fanatanterahana ny fampanantenana efa nambarany hatramin’izay izany. “Izay ampanantenaiko dia tsy maintsy tanterahiko”, hoy izy. Toromarika avy any aminy no nahatrarana an’ireto mpanao trafikana andramena ireto. Nisy avy eo ny fananganana vondron-kery manokana nanatontosa ny fisamborana rehetra.
Tsiahivina fa efa notanana am-ponja vonjimaika avokoa ireo olona voarohirohy tamin’iny fanondranana andramena antsokosoko tao anaty sambo “Lumina” iny. Fahatrarana ambodiomby no nihatra tamin’izy ireo satria dia tratra tao anatin’ny sambo noentin’izy ireo mihitsy ilay andramena miisa 340.